Saliidaha muhiimka ah | December 2019
Ugu Weyn Ee Saliidaha muhiimka ah
Codsashada iyo sifooyinka faa'iidada leh ee jimicsiga
Waxaa ka mid ah dhirta iyo dhirta gudaha, biyuhu waxay noqdaan kuwa aad loo jecel yahay - waa geedo aan caadi ahayn oo leh hanti fitamiin oo hodan ah iyo dhadhan aan caadi aheyn. Sidaa daraadeed, waxaan hoosta ka eegnaa sifooyinka bogsashada ee jimicsiga iyo sifooyinka kale. Waxyaabaha kiimikada ee kiimikada (watercress) Isticmaalka bacda-biyoodka meesha ugu horraysa waxaa bixiya fitamiin iyo fitamiin badan oo hodanka ah, taas oo keenaysa dhadhan aan caadi ahayn ee dhirtaas.
In hab Yurub ah waxay u egtahay mid xariif ah iyo xitaa leh turjumaan japan ah - oregano, iyo in aannu fikradeena - oregano, iyo ugu caadiga ah. Xitaa Giriiggii hore waxay soo baxeen fikradda ah in ay saliidda ka jaraan miraha geedka, taas oo loo adeegsan jiray si ballaaran oo guulo ah nolol maalmeedka iyo dagaalka. Maanta, afar kun oo sano ka dib, saliidda oregano weli waa, sida ay yiraahdaan, isbeddel, helitaan badan oo ka mid ah taageerayaasha, sababtoo ah waa runtii badeecad, waxtar badan oo ka mid ah.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Saliidaha muhiimka ah 2019